Abadlali bebhola laseCzech Republic- Indaba Yabo Ye-Untold Biography
Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseCzech Republic
Lapha, sikutshela ama-Biography Amaqiniso wabadlali bebhola baseCzech Republic. Ukutshela izindaba zabo zobuntwana kukuhlomisela ngolwazi olubalulekile lokuthi lobu buntu bama-greats buqale kanjani izimpilo zabo.
Ngaphandle kokungabaza, i-Czech Republic football iye yathandwa kakhulu eminyakeni edlule ngenxa yamagama amakhulu afana UPavel Nedvěd futhi UPetr Čech. Ukungakhohlwa, abanye okufanele bakhulume ngabo uJan Koller, uMilan Baroš no UTomáš Souček.
Lesi sigatshana seLifeBogger sibonisa iqoqo lezindaba zezinsizwa zabadlali bebhola laseCzech Republic abasebenza nabathathe umhlalaphansi. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale ngabadlali abalandelayo beCzechia.